स्कूल नामांकन मा Apartheid दक्षिण अफ्रिका
इतिहास र संस्कृति अफ्रिका इतिहास
by अलिस्टर बोड्डी-इभान्स
सन् 1 993मा दक्षिण अफ्रीकामा ब्ल्याक र व्हाइट्सका लागि स्कूल नामांकनमा डाटा
यो जानिन्छ कि Apartheid युग मा व्हाट्स र ब्लैक्स को अनुभवहरु बीच एक बुनियादी अंतरहरु मध्ये एक दक्षिण अफ्रीका शिक्षा थियो। जब अफगानिस्तानमा लागु गरिएको शिक्षा विरुद्ध लडाइँ अन्ततः जितिएको थियो, अप्ठेरो सरकारको ' बान्ति' शिक्षा नीतिले भनेको थियो कि काले बच्चाहरूले पनि त्यस्ता मौकाहरू व्हाइट बच्चाहरू पाएनन्।
माथिको टेबलले सन् 1 993मा दक्षिण अष्ट्रेलियामा व्हाइट र ब्ल्याकहरूको स्कूल नामांकनको लागि डेटा प्रदान गर्दछ। डाटाले दुई समूहहरू बीच स्कुलिङ अनुभवहरू बीचको महत्त्वपूर्ण मतभेदहरू हाइलाइट गर्छ, तर तपाइँले विश्लेषण गरिसकेपछि थप जानकारी आवश्यक छ।
दक्षिण अफ्रिकाको 190 जनगणनाबाट डेटा प्रयोग गर्दै, सेतो आबादीको लगभग 21% र ब्ल्याक जनसंख्याको 22% विद्यालयमा भर्ना गरियो। जनसंख्या वितरणमा मतभेद, तथापि, त्यहाँ विद्यालयमा नामाकरण गरे स्कूल उमेरका ब्ल्याक बच्चाहरू थिए।
विचार गर्न दोस्रो तथ्य शिक्षामा सरकारी खर्चमा फरक छ। सन् 1983 मा दक्षिण अफ्रिकाको अपार्टमेद सरकारले प्रत्येक व्हाइट बच्चाको लागि शिक्षामा R1,2 11 को औसत खर्च गर्यो, र प्रत्येक ब्ल्याकको बच्चाको लागि केवल R146 मात्र खर्च गर्यो।
शिक्षण कर्मचारीहरूको गुणस्तर फरक थियो - लगभग सबै सेतो शिक्षकहरूको एक तेस्रो विश्वविद्यालयको डिग्री थियो, बाँकीले सबै मानक 10 म्याट्रिक परीक्षा पास पारिएको थियो। ब्ल्याक शिक्षकहरूको मात्र 2.3% विश्वविद्यालयको डिग्री थियो, र 82% मानक 10 म्याचमा पुग्न सकेन (आधाभन्दा बढी मानक स्तरसम्म पुग्न सकेन)। शैक्षिक अवसरहरू प्रायः ह्वाइटका लागि अधिेक्षात्मक उपचारको लागी लुकाइएको थियो।
अन्ततः, कुल आबादीको अंशको रूपमा सबै विद्वानहरूका लागि समग्र प्रतिशत व्हाइट र ब्ल्याकहरूको लागि हो, स्कूल कक्षामा नामांकनको वितरण पूर्ण फरक छ।
1 सन् 1980 मा दक्षिण अफ्रीका मा लगभग 4.5 मिलियन व्हाइट्स र 24 मिलियन ब्ल्याक थिए।
सन् 1 993मा दक्षिण अफ़्रीका विद्यालयहरूमा भित्री नामांकनको लागि ग्राफ
उपरोक्त ग्राफले विभिन्न स्कूल ग्रेड (वर्ष) मा स्कूल नामांकनको सापेक्ष अनुपात देखाउँदछ। यो मानक 8 को अन्तमा स्कूल छोड्न अनुमति दिइएको थियो, र तपाईंले ग्राफबाट देख्न सक्नुहुनेछ कि एक स्तरको अपेक्षाकृत नियमित स्तरको स्तरमा। के यो पनि स्पष्ट छ कि विद्यार्थीहरूको उच्च अनुपात अन्तिम मानक 10 मापन परीक्षा लिन जारी छ। ध्यान दिनुहोस् कि थप शिक्षाको लागि अवसर मानक99 र 10 को लागि विद्यालयमा बस्ने व्हाइट बालबालिकाहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिईयो।
दक्षिण अफ़्रीकी शिक्षा प्रणाली अन्त-वर्षीय परीक्षा र मूल्यांकनमा आधारित थियो। यदि तपाईंले परीक्षा पास गर्नुभयो भने तपाईले अर्को विद्यालयको वर्षमा ग्रुप सार्न सक्नुहुनेछ। केवल केहि सेतो बच्चाहरू अन्त्य-वर्षका परीक्षाहरू असफल भए र विद्यालयको स्तर पुन: बस्न आवश्यक थियो (याद गर्नुहोस्, शिक्षाको गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण थियो), र यसैले ग्राफ यहाँ छात्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व पनि गर्दछ।
सन् 1 993मा दक्षिण अफ़्रीका विद्यालयहरूमा ब्ल्याक नामांकनको लागि ग्राफ
तपाईं उपरोक्त ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ कि डेटा निम्न स्तरहरूमा उपस्थित हुन छोडिएको छ। ग्राफले देखाउँछ कि 1982 मा ब्ल्याक बालबालिकाहरूको एकदम ठूलो अनुपात माध्यमिक विद्यालयको अन्तिम कक्षाको तुलनामा प्राथमिक विद्यालय (कक्षा उप ए र बी) मा भाग लिन थाल्यो।
थप कारकले ब्ल्याक नामांकन ग्राफको आकारलाई प्रभाव पारेको छ। सेतो नामांकनको लागि अघिल्लो ग्राफको विपरीत, हामी विद्यार्थीहरूको उमेरमा डेटा सम्बन्धित छैनौं। ग्राफ निम्न कारणहरूको लागि स्वेड गरिएको छ:
यो काले बच्चाहरु को लागि सेतो बच्चाहरु भन्दा कम वर्ष को लागि स्कूल मा भाग लिन को लागि साधारण थियो। ग्रामीण जीवनका लागि काला बच्चाहरु (उनीहरूलाई पशुधन र घरको कामको साथ सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो) मा धेरै भन्दा ठूलो माग थियो जसको तुलनामा शहरी-जीवित परिवारहरूले अनुभव गरेको थियो।
ग्रामीण इलाकाहरूमा प्रायः काला बच्चाहरु शहरी इलाकाका बच्चाहरु भन्दा पछि स्कूल शुरु गरे।
सेतो र कालो कक्षाहरूमा अनुभवी शिक्षणमा असमानता, र तथ्य भनेको कि ब्ल्याकहरू सामान्यतया उनीहरूको दोस्रो (वा तेस्रो) भाषामा पढ्नका लागि उनीहरूको प्राथमिक भन्दा बढी सिकाइएको थियो, यसको मतलब यो थियो कि ब्ल्याक बालबालिकाहरूले अन्त्यको वर्षको अन्त्य असफल हुन सकेन । धेरैलाई स्कूल ग्रेड दोहोर्याउनु आवश्यक थियो। (यो एक विशेष ग्रेड धेरै पटक पुन: गर्न को लागी एक विद्यार्थी को लागि अज्ञात थिएन।) उप ए र बी मा विद्यार्थीहरु को संख्या एक महत्वपूर्ण संख्या को वर्ष ले रिसेप्शन मा शामिल छ।
ब्ल्याक विद्यार्थीहरूको लागि थप शिक्षाको लागि कम अवसरहरू थिए र यसैले स्कूलमा बस्नका लागि कम कारण थियो।
दक्षिण अफ्रिकामा नौकरी आरक्षणले व्हाइटको हातमा दृढतापूर्वक सेतो कलर कार्यहरू राख्यो। दक्षिण अफ्रिकाका कालोका लागि रोजगारीका अवसरहरू सामान्यतया म्यानुअल कार्यहरू र अकुशल स्थिति थिए।
दोश्रो ग्राफ, जो Apartheid प्रणाली को शैक्षिक असमानता को वर्णन गर्दछ, एक औद्योगिक देश को नि: शुल्क, अनिवार्य शिक्षा, र एक गरीब, तीसरा विश्व देश संग एकदम कम औद्योगीकरण को साथ हो।
टाइमलाइन: सुवेज संकट
अफ्रिकामा विश्व युद्धको विरासत
अंतरजातीय विवाह विवाह Apartheid
युरोपेली अन्वेषण अफ्रिका
उद्धरणहरू: नेल्सन मन्डेला
पाँचवटा चीजहरू तपाई अफ्रिकाको बारेमा थाहा छैन
क्वेस्टको लागि क्विल
इतिहास र मूल को राज्य को उत्पत्ति
सोकोमेन क्यान्टको एन'को भाषा
जंगल मा रंबल: ब्ल्याक पावर बक्सिंग सदी को मिलान
दक्षिण अफ्रीकामा मफेन के थियो?
वाल्टर मैक्स उलीट सिसुलुको जीवनी
अफ्रिकी हङकङ चित्रहरू
कोम्बाहे नदी एकत्रित
CSUDH जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
7 उत्तरी अमेरिकामा आम आक्रमणकारी ट्री प्रजातिहरू
महाराष्ट्र वेदडा विजय
हिम हिम ओलम्पिकहरूको बारेमा तथ्य
राम्रो बेरोजगारको लागि तपाईंको वालेटमा बस्नुहोस्
हेमलक वुनी Adelgid - पहिचान र नियन्त्रण
मौखिक परीक्षाको तयारी गर्दै
एक्सेलका ISNUMBER प्रकार्यको साथ नम्बरहरू समाविष्ट कक्षहरू फेला पार्नुहोस्
सन्तुलित समीकरणमा तिल सम्बन्ध
मरेको हेरचाह गर्दै
के यो संघीय भवनहरूको चित्रहरू लिन अवैध छ?
5 स्पेनिश शब्दहरू वा वाक्यांशहरू तपाईं 'के' को लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
7 महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट काल
रेकी - मूल कुराहरु भन्दा बाहिर
विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश
कुजुर 25 को
कसरी अनियमित फ्रांसीसी शब्द 'मेटर्रे' ('राख' गर्न)
शीर्ष Bellamy ब्रदर्स गीतहरु को '80s
18 अजीब, जंगली, र उदार हिलात्मक टिन्डर प्रोफाइल
दर्शन परीक्षाको लागि कसरी अध्ययन गर्ने
'वाटरशिप डाउन' उद्धरण